भोलि असार ११ गते बिहिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल!
असार १०, २०७७ SG
यसदिन तपाई सम्हालेर हिड्नुहोस् । तपाई आफ्नो आफन्तहरूसँग कुनै पनि विवाद नगर्नुहोस। शारीरिक र मानसिक रूपबाट तपाई चिन्तित हुनुहुनेछ । अनिन्द्राको कारण स्वास्थ्य खराब हुनसक्छ । बौद्धिक चर्चाबाट आनन्द प्राप्त हुनसक्नेछ।
यसदिन तपाईलाई भावनाहरूको बन्धनमा बाधिएको अनुभव हुनेछ। तपाईको कार्य सम्पन्न हुदा आनन्दको मात्रा वृद्धि हुनेछ । दाजु-बहिनिबाट लाभ हुनेछ। शारीरिक र मानसिक रूपबाट प्रफुल्लतताको अनुभाव गर्नुहुनेछ। आर्थिक लाभ हुने सम्भावना रहेको छ। साथै धन खर्च पनि हुनेछ।
तपाई आफ्नो मनमा नकारात्मक मानसिक व्यवहार नराख्नुहोस । असन्तुष्टिको भावनाले मनमा चिन्ता रहनेछ। पारिवारिक वातावरण राम्रो रहदैन । तपाई प्रतिस्पर्धीहरु माथि विजयी बन्नुहुनेछ ।
तपाई यसदिन भावनाको प्रवाहमा नबहकिनुहोस्। छोटो यात्रा हुने सम्भावना रहेको छ । यस दिन तपाईको स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ र मन पनि प्रसन्न रहनेछ। तर मध्यान्हपछि तपाईमा निराशाको भावना आउन सक्नेछ। धनको खर्च अधिक हुनेछ ।
तपाई यसदिन कुनै पनि निर्णय लिनसक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न, त्यसैले यसदिन आवश्यक निर्णय नगर्नुहोस् । पारिवारिक कार्यमा धन खर्च हुनेछ। तपाई आफ्नो बोलिमा संयम राख्नुहोस । नजिकका मानिससंग मनमुटावको प्रसंग बन्नेछ।
तपाईको यसदिन मध्यम फलदायी रहनेछ। यसदिन परिस्थिति अनुकूल रहनेछ। शारीरिक र मानसिक रूपबाट सुख-शान्ति रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि वातावरण अनुकूल रहनेछ। धनहानिको साथ-साथ मानहानिबाट पनि हुने सम्भावना रहेको छ।
यसदिन तपाईको पारिवारिक वातावरण आनन्दमयी रहनेछ। साथै परिवारका सदस्यहरूसँग मायालु सम्बन्ध रहनेछ। घरको साज-सजावटमा परिवर्तन हुनेछ। मानसिक स्वस्थतामा पनि वृद्धि हुनेछ। मानसिकरुपबाट शान्तिको अनुभव हुनेछ।
तपाईको लागि यसदिन भाग्यवृद्धिको योग रहेको छ । विदेशमा रहेका स्नेहीबाट राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। धार्मिक यात्रा हुने सम्भावना रहेको छ। मान-सन्मान प्राप्त हुनेछ।
तपाईको शारीरिक स्वास्थ्य बिहानको समयमा न्यानो रहनेछ । निषेधात्मक विचारले नकारात्मक रूपमा तपाईको मनको स्वस्थतामा असर गर्नेछ, त्यसैले वैचारिक तहमा संयम राख्नु आवश्यक छ। आकस्मिक धनप्राप्तिको योग छ।
यसदिन तपाई परिवारजनको साथ आनन्दपुर्वक यात्रा हुनेछ। तर मध्यान्हपछि तपाइको मनमा चिन्ताको अनुभव हुनेछ। अधिक खर्च हुनेछ। सरकारी कार्यमा बाधा आउनेछ।
तपाईको यसदिन सुख-शान्तिपुर्वक बित्नेछ। पारिवारिक जीवनमा पनि आनन्द छाउनेछ। शारीरिक र मानसिक स्वस्थता प्राप्त हुनेछ। व्यवसायिक क्षेत्रमा तपाईलाई कीर्ति प्राप्त हुनेछ ।
यसदिन तपाई विदेशी आकर्षणबाट टाढा रहनुहोस। कुनैपनि व्यक्तिको साथ बौद्धिक चर्चा या वाद-विवाद नगर्नुहोस। साथै यसदिन नया कार्यको सुरुवात नगर्नुहोस। मध्यान्हपछि तपाइको स्थितिमा आकस्मिक सुधार देख्नेछ। शारीरिक र मानसिक रूपबाट तपाई स्वस्थताको अनुभव गर्नुहुनेछ।
प्रकाशित : बुधबार, असार १०, २०७७१३:५९
भोलि असार १५ गते सोमबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल!